Chitatu 15 Zvita 2021
Nguva Argo naGravithin chiitiko cheyakagadziriswa nguva yavo dhizaini yakafuridzirwa neSextant. Iyo inoratidzira yakanyorwa zvakapetwa kudhiraivha, inowanika mumimvuri miviri, Deep Blue neBlack Sea, mukuremekedza yeArgo chikepe mythical adventures. Mwoyo wayo unorova nekutenda kune Swiss Ronda 705 quartz kufamba, nepo girazi resafiri uye yakasimba 316L simbi yakasungwa inova nechokwadi chakanyanya kuramba. Iyo zvakare 5ATM isina mvura-inodzivirira. Iyo wachi inowanikwa mune matatu akasiyana makara mavara (goridhe, sirivheri uye dema), maviri dial shades (Yakadzika Bhuruu uye Gungwa Dema) uye mitanhatu mitsetse mhando, mune maviri maviri akasiyana machira.
Chipiri 14 Zvita 2021
Womenswear Muunganidzi Dhizaini yeHybrid Runako yekuunganidza ndeyekushandisa iyo cuteness senzira yekupona. Yakawanikwa yakanaka maficha ibvu, ruffles, uye maruva, uye ivo kudzokororwa neyakajairwa millerals uye couture maitiro. Izvi zvinodzokorora zvekare chekare couture maitiro kune yemazuva ano hybrid, iyo ine rudo, yakasviba, asi zvakare isingaperi. Iyo yose dhizaini yekuita yeHybrid Runako inosimudzira kuchengetedza kuti ugadzire isingagumi dhizaini.
Muvhuro 13 Zvita 2021
Rin'i Mimaya Dale, mugadziri wehorodhi yaOgi akaendesa meseji yekufananidzira neiyi mhete. Kufuridzirwa kwake kwemhete kwakauya kubva pane izvo zvinoreva kuti vateveri veJapan vanopeta vane uye kuti vanodiwa sei mutsika yeJapan. Iye anoshandisa 18K Yero goridhe uye safiro yezvinhu uye ivo vanoburitsa yakasarudzika aura. Uyezve, iyo fan inongogara inogara pane mhete mune iyo kona iyo inopa yakasarudzika runako. Dhizaini yake kubatana pakati peEast ne West.
Svondo 12 Zvita 2021
Rin'i Mhete yeGabo yakagadzirirwa kukurudzira vanhu kuti vadzokere kudivi rekutamba rehupenyu iro rinowanzorasika kana vanhu vakuru vasvika. Mugadziri akafuridzirwa nendangariro dzekutarisa mwanakomana wake achitamba nekavaravara kake wemashiripiti. Mushandisi anogona kutamba neringi nekutenderera iwo maviri akazvimirira ma module. Nekuita izvi, iyo gemstone color seti kana chinzvimbo chemamoja chinogona kuenderana kana kushatiswa. Kunze kwechinhu chinotamba, mushandisi ane sarudzo yekupfeka rakasiyana ringi mazuva ese.
Mugovera 11 Zvita 2021
Mhete Maparera anotamba pakati pemafungu egungwa, ndiwo mhedzisiro yekufemerwa kubva mugungwa nemaparera uye iri ye3D yemhando mhete. Iyi mhete yakagadzirirwa nekubatanidzwa kwegoridhe uye nemaparera ane mavara ane chakakosha dhizaini yekumisikidza kufamba kwemaparera pakati pemafungu anotinhira egungwa. Iyo dhayamita yepombi yakasarudzwa muhukuru hwakanaka izvo zvinoita kuti dhizaini ive yakasimba zvakakwana kuti iite modhi inogadzirwa.
Chishanu 10 Zvita 2021
Eyeglass The „yepamusoro kuunganidzwa | huni "inoratidzwa nemagirazi egirini uye dhizaini yacho inosimbiswa nekuumbwa kwematatu-matatu. Kubatanidza huni hutsva uye kwakasarudzika sanding neruoko zvinoreva kuti yega yega ROLF chimiro chegirazi chiri chinhu chakagadzirwa nehunyanzvi.
Guiyang Zhongshuge Bookstore China 20 Ndira
Plates Kutaurirana Kwekuona Chitatu 19 Ndira
Lavazza Tiny Espresso Muchina Chipiri 18 Ndira
Nguva Womenswear Muunganidzi Rin'i Rin'i Mhete Eyeglass